Ukukhethwa Esinengqondo Of Usimende Carbide Drill Amabhithi
Kukholakala njalo ukuthi ukubhola kumele kwenziwe ngezinga eliphansi lokuphakelayo nangejubane lokusika. Lo mbono wake walungile ngaphansi kwezimo zokucubungula kokuzivocavoca okujwayelekile. Namuhla, ngokufika kwe-carbide drill, umqondo wokubhola nawo ushintshile. Ngaphambili ...
Izinhlobo Eziyisishiyagalombili Zamathuluzi E-Carbide
Amathuluzi we-carbide ahlanganisiwe angahlukaniswa ngezinhlobo ezahlukene ngokuya ngemigomo ehlukile. Isibonelo, ngokusho kokuhlukaniswa kwezinto ezahlukahlukene zokucubungula, nangokuya ngezigaba zobuchwepheshe bokusebenza obuhlukile. ...
Amathuluzi Okumba Usimende We-Carbide Geological
Izinto zokusetshenziswa zokukhiqiza amathuluzi wezimayini wekhwalithi ephezulu we-alloy ngokuyisisekelo ama-alloys e-WC-Co, futhi iningi lawo ingama-alloys anezigaba ezimbili, ikakhulukazi ama-alloys amabi kakhulu. Imvamisa ngokusho kwamathuluzi ahlukene wokubhola amatshe, ukuqina kwedwala okuhlukile, noma ama-par ahlukile ...